Kule nkathi lapho inombolo ye processor cores imayelana ukuba abangaphezu kwekhulu futhi amashumi amaningana RAM akusona isimanga, neze ubani ukhumbula "amabhuleki" computer. Nokho, ngezinye izikhathi lokhu imishini ngokwayo uyakhumbula, lapho ihlolwe futhi uhlelo ubukele ngokuzumayo iqala ukusebenzisa kancane kakhulu ngenxa umthwalo CPU, eduze 100%.
Ngokuvamile, sihlobana inqubo wmiprvse.exe. Kuyini futhi ziyini? Yilokhu esikubiza ngani kulesi sihloko.
Okokuqala, kuba - inqubo ekhethekile isistimu ukuthi amaphi unesibopho ekuphatheni computer ukuxhuma kumadivaysi angaphandle (iphrinta, isibonelo). Abanye abasebenzisi ngubani nimbonile kumphathi womsebenzi, ngokushesha uqala sokuba netwetwe, ecabanga igciwane itheleleke imishini.
Kodwa kuba - inqubo uhlelo evamile adingekayo operation esitebeleni of eziningi ongakhetha-Windows. Kodwa musa ngokushesha ukwethemba wmiprvse.exe. Kusho ukuthini?
Lapho kufanele zitholakale?
Kuvikeleka le nqubo angabhekwa njengoba kufakazelwa kuphela uma itholakala endaweni "kwesokudla". Okuningi ngokunembile, "endaweni» C: \_ Windows \_ System32. Uma okufanayo isihloko ukusebenzisa ilungelo kusukela Windows umkhombandlela ongumsuka, awokuthi igciwane lohlobo. Ngakho, izazi Norton Inkampani ibonisa ukuthi ezimweni eziningi, ngakho simaskwe noma W32.SillyFDC W32.Babelloh.
Ngazi kanjani lapho le nqubo iqale kabusha?
Kungenzeka uye waphawula ukuthi indawo isicelo ukusebenzisa kubalulekile. Ukuze uthole it, kufanele ulandele izenzo ezimbalwa ezilula. Okokuqala, chofoza "inhlanganisela magic» Ctrl Alt Susa. Khishiwe iwindi Umsebenzi Manager lapho sinesithakazelo kwesikwenzayo ithebhu "izinqubo". Bheka-ke wmiprvse.exe. Yini lokhu kusinika?
Chofoza ngayo inkinobho yegundane kwesokudla, bese ukhetha "Vula Isitoreji" kusukela kumenyu yokuqukethwe. Yilokho. Vula leyo folda, kusukela ukuqala inqubo uya lapho. Eqiniseka ubuqiniso isicelo.
Ngenxa yalokho inqubo ngokweqile ohlelweni?
Kwenzeka ukuthi uhlelo uqala ngokulambisa ukuhambisa njengoba isikhathi wmiprvse.exe ngenxa. Kusho ukuthini? Isimanga siwukuthi kodwa impendulo eqondile elaliphinyiselwa ngayo ngisho ukubanika Microsoft bokusebenza. Amalungu njalo chaza uhlobo olufanayo isimo: kuqala, konke kwaba amahle, kodwa ke nqubo yaqala ngezizathu ezingaziwa, umthwalo processor 99%.
It ixhunywe ohlelweni kungenziwa ubukele noma uhlelo ngokwayo, egameni okuyinto uhlelo lusebenza. Khumbula, uma ungazange olusha umshayeli ku iphrinta noma enye idivayisi neuropathy muva. Uma kunjalo, kufanele azame ukusebenzisa inguqulo endala. Ngokuvamile lokhu kusiza njengoba yena umsebenzi singenele inqubo ivame ukuhlotshaniswa amaphutha yokugcina umshayeli ukukhululwa.
By endleleni, nokuthi ukukhubaza wmiprvse.exe? Lokhu kwenziwa kakhulu elula: ucindezela inhlanganisela yokhiye Ctrl Alt Susa, bese ku Task Manager ithebhu "Izinqubo" kukhethiwe. Thola ohlwini "villain", chofoza kukho inkinobho yegundane kwesokudla, kanye kwimenyu pop-up ukhetha "End Process." Isexwayiso! Uma processor selulayisheke ku-90% noma ngaphezulu, izinyathelo ezingenhla zingase zithathe isikhathi eside kakhulu.
Thatha isikhathi sakho futhi musa ukwethuka, ngoba esebenzisa inkinobho Qala kabusha iphendukele kufanele kuphela sokugcina.
Yebo, lokhu kungase kubonakale kuyinto engasho lutho, kodwa amagciwane ubuye izimbangela CPU sindisa. Nokho, icala kuleli cala inqubo wmiprvse.exe, nokuthi uhlelo lokusebenza olunonya ukuthi masquerades njengoba kuye.
Ukuze uqinisekise lokhu, sebenzisa ibhodi ukunquma indawo yayo evamile, okuyinto sanikeza ngenhla. Uma umphumela omuhle (kusukela kudiski impande noma ifolda-Windows, kunokuba System32), kuyodingeka ucabange ngalokho uhlobo hlelo uzobe "intuthu iminonjana."
Sincoma ukusetshenziswa kwemikhiqizo izinkampani antivirus yasekhaya: Dr.Web futhi Kaspersky unqulo wesi arab kuphela. Lokhu kungenxa nje kuphela esiqondisweni sabo engcono kuphambene izinsongo ukuthi kukhona luvame kakhulu ezindaweni RuNet, kodwa futhi yokuthi abakhiqizi baye zinakekelwe khona evamile-Live-CD izinguqulo.
Okubalulekile! Abasebenzisi babike ukuthi ngokuvamile kakhulu kuvela ukuthi icala PUP.Adware.RelevantKnowledge igciwane, kuze kube muva nje e imodi evamile is hhayi Kutsho unqulo wesi arab kuphela. Kuhlelo ngokuvamile lwangena ngenxa inguqulo endala ye-Flash, bese esikhundleni ifayela evamile uhlelo. Ngenxa leli qiniso isikhathi ukuthola eside lokhu ukutheleleka Kwakunzima kakhulu.
By endleleni, futhi kwezinye izimo, igciwane ngempumelelo bezifihle njenge- uhlelo izinqubo, kodwa ngokuvamile ikhipha ukuthi umphathi wokusebenza ngokuzumayo wafuna Ngokwesibonelo isicelo esifanayo yesibili. Kulokhu, akunjalo. Uma ubona wmiprvse ezimbili nje, ngokushesha alahle konke ukusola malware akudingekile. Technical Support Microsoft uthi isistimu ingakwazi ukusebenzisa izinqubo ezimbili ngesikhathi esisodwa, uma ukusebenzisa amasevisi ehlukile noma iyiphi Umbuso indawo.
Wenzani lapho processor izohamba wmiprvse.exe "zamehlo", kodwa igciwane akuyona? Sizoba ukuba ibekezele futhi methodically ukubala uhlelo egameni okuyinto waqala. Ingabe kube lula, kodwa umsebenzi ngempela methodical futhi eyisicefe.
Cindezela inhlanganisela yokhiye Win R, bese ebhokisini elivelayo ukungena AmaDrayivu umyalo MSConfig. Sinesithakazelo kule thebhu "Ukuqalisa". Shoot amabhokisi nazo zonke izinhlelo ngaphandle koyedwa (okungahleliwe), chofoza "OK". Uyavuma kabusha.
Ngemva kwalokhu hlola ukuziphatha inqubo. Uma konke kuhamba kahle (noma uma ingekho), ukuphinda yonke inqubo futhi, "Isibuko" kuhlanganise uhlelo elandelayo. Ngakho ukwenza nje isephulamthetho ka-sindisa ngeke ukutholwa. Ngemva kwalokho kufanele benze ngokuvumelana isimo. Uma uhlelo ofuna, zama ukubeka yakamuva noma i version ngaphambili. Uma kungenjalo, kungcono ukususa ngokuphelele. Njengomthetho, bese iphele inkinga.
Uma kungenjalo e izinhlelo
Kungenzeka kanjani lokho, uma wmiprvse.exe (wmi umhlinzeki aphethe) kusukela uhlelo izimele, futhi Ukukhipha yabo akukuniki nhlobo Imiphumela? Kulokhu, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba bangenele inkonzo. Nalapha, chofoza Win R, faka umyalo futhi. Siya "Amasevisi" ithebhu ngalesi sikhathi. Zonke izinyathelo okwalandela zifana esiye eshiwo ngenhla.
Futhi, ningawenzi ubuvila ukucisha amagajethi (kudeskithophu). Umsebenzisi amazwana abonisa ukuthi ngokuvamile inqubo ill-fated iqala lokuthumela igama computer emva ukufakwa lokusebenza sezulu noma into efana naleyo.
Uma ayisheshi, wmiprvse.exe (ukuthi kule nqubo, sesikubonile esiphethweni) unesibopho kuhlanganise exhunywe okuphathelene nomngcele. Zama ukucima iphrinta, isithwebuli nabo bonke imishini ekhona, ngalesosikhathi sebenzisa ngentuthuko.
Emuva e-ekuqaleni kwalesi sihloko, sathi lezi zinkinga uqale masinyane ngokushesha ngemva kwanoma iyiphi okuthuthukile. Uma unomzimba okwenzekile, qiniseka ukususa zonke nezimagqabhagqabha weza, bese uyibeke eyodwa ngesikhathi (efana uhlelo noma isevisi). Lokho buyekeza, ngenxa okuyinto inqubo iqala iziphethe ngendlela engafanelekile kuholele kumelwe kususwe futhi.
Okubalulekile! Uma inqubo liyindinganiso ke kwezinye izimo kungase kwenzeke futhi overload CPU lapho yokuxhuma abanye (imodemu GPRS, isibonelo) imishini ngokusebenzisa echwebeni COM. Kulokhu, lo uvalo ukukhathazeka akudingekile ikakhulukazi, uma senza okufanayo siyenzeka imizuzwana embalwa, akukho okubi ngalokho. Nokho, ungazama esikhundleni umshayeli imodemu elisha noma ubudala. Njengoba kakade siye wathi futhi, kwezinye izimo siyasebenza ngempela.
Ngakho, ukubhekana nale nkinga ngempela ngempela, kodwa ngeke kuthathe isikhathi nesineke.
Indlela yokuvula i-uqalisa? Indlela yokuvula imenyu sokuqalisa?
"Ehlobo kakhulu ekuphileni kwethu": nabalingisi icebo le filimu
Bank "Tinkoff": nokwethenjelwa isilinganiso. Kunini "Tinkoff Bank" kule simo amabhange?
Izinhlobo zokugqoka kanye nomphumela abawulethayo